Ọdịnaya Ahịa Ahịa | Martech Zone
Ma ị gafee ọdọ mmiri ahụ ma ọ bụ ebe a na America, ekwetaghị m na ihe ịma aka ndị dị na ahịa ọdịnaya enweghị mmasị… ịmepụta atụmatụ atụpụtara nke na-amalite ọdịnaya gbara ọkpụrụkpụ metụtara ndị na-ege gị ntị n'ofe usoro na ebumnuche siri ike. Enweghị ihe nzuzo, ọ bụ naanị ọrụ siri ike.
Dị ka ọtụtụ n'ime anyị ga-atụ anya na nchọta ha gosipụtara na mmefu ego ọdịnaya ga-ebili na 2014. Mana ka itinye ego na-abawanye, ọtụtụ ndị ahịa anaghị enwe usoro ọdịnaya doro anya. Nke a na - eme ka ọtụtụ ndị ahịa nwee otu nsogbu ịma aka. BB, otu ụlọ ọrụ na-ere ahịa UK kwupụtara isi ihe ịma aka ma nye nduzi banyere otu esi emeri ha na infographic dị n'okpuru.
inwe a atụmatụ, n'ezie, nwere ike inyere gị aka ịhazi akụ, ọwa, na nkwalite iji bulie mmetụta nke mbọ gị.
Tags: nnwetaanalysismara amaraọwacontent Marketingahịa nnwetaaka ndi ahiaezi ndị ahịanjigide ndị ahịainfographicedu ọgbọiguzosi ike n'ihenlele ihu akwụkwọakukonjigideokporo ụzọokporo ụzọ weebụsaịtị